GỤỌ NKE Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Mizo Moore Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Sranantongo Swahili Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Zulu
“ỊDỊ n’Otu n’Agbanyeghị Ndịrịta Iche” bụ okwu na-ewu ewu e ji akọwa njikọ dị ná mba India. Ime ka e nwee ịdị n’otu ná mba a sara mbara nke nwere ndịrita iche dị ukwuu n’ọdịbendị, asụsụ, okpukpe, agbụrụ, ejiji, na nri abụghị obere ọrụ. Otú ọ dị, a na-ahụ ịdị n’otu dị otú ahụ n’ụlọ ọrụ na-elekọta ọrụ Ndịàmà Jehova nke dị n’India, n’agbanyeghị na ndị ọrụ afọ ofufo bi ma na-arụ ọrụ n’ebe ahụ si n’ọtụtụ steeti na ógbè ndị na-erughị ịbụ steeti ma na-asụ ọtụtụ asụsụ dịgasị iche.
• Ka anyị zute Rajrani—nwa agbọghọ si Punjab, n’ebe isi isi nke ebe ugwu ọdịda anyanwụ India. Mgbe Rajrani nọ n’ụlọ akwụkwọ, otu n’ime ụmụ klas ya malitere iso Ndịàmà Jehova na-amụ Bible. Nwa agbọghọ a gbalịrị ịdọta mmasị Rajrani n’ebe Bible dị. Ebe ọ bụ na nwa klas ya ahụ amachaghị Bekee, Ụlọ Nche adịbeghịkwa n’asụsụ Punjabi n’oge ahụ, ọ rịọkwara Rajrani ka o nyere ya aka n’ịsụgharị ihe ndị dị na magazin ahụ. Ihe Rajrani gụtara n’Ụlọ Nche malitere inwe mmetụta dị ukwuu n’ebe ọ nọ nke na n’agbanyeghị mmegide nke ndị mụrụ ya, o nwere ọganihu ruo n’ókè nke ịrara ndụ ya nye Jehova Chineke. N’ịbụ onye na-eje ozi taa na Betel dị n’India, ọ na-eme kpọmkwem otu ihe ahụ meghere anya ya n’ebe eziokwu ahụ dị. Ọ na-asụgharị mbipụta ndị Kraịst gaa n’asụsụ Punjabi!
• Tụleekwa ihe banyere Bijoe, bụ́ onye si n’akụkụ ọzọ nke India—steeti Kerala nke dị na ndịda ebe ọdịda anyanwụ. A chụrụ Bijoe na kọleji n’ihi ịnọpụ iche n’oge a na-eme ememe ịhụ mba n’anya. Mgbe okwu ikpe nke ofufe dị ọcha nwere mmeri dị ịrịba ama na ya bisịrị, Bijoe laghachiri ụlọ akwụkwọ. * Ọ gakwara ụlọ akwụkwọ dị elu. Otú ọ dị, ọnọdụ omume rụrụ arụ dị n’ebe ahụ nyere akọ na uche ya nsogbu, ya mere ọ kwụsịrị na taam nke mbụ ya. Ugbu a, mgbe ọ nọsịworo afọ iri na Betel, ọ na-enwe mmetụta na ya eritewo uru site n’ịbụ onye so n’ezinụlọ Betel ahụ nke ndị nọ na ya dịgasị iche ma dịrị n’otu karịa ka ya gaara eritewo site n’ịchụso agụmakwụkwọ ka elu.
• Norma na Lily dịcha ihe karịrị afọ 70, ha abụwokwa ndị inyom di ha nwụrụ ruo ọtụtụ afọ. Nke ọ bụla n’ime ha ejewo ozi oge nile ruo ihe karịrị afọ 40. Lily anọwo na-arụ ọrụ n’alaka ụlọ ọrụ ahụ ruo ihe karịrị afọ 20 dị ka onye nsụgharị nke asụsụ Tamil. Norma bịara Betel afọ 13 gara aga mgbe di ya nwụnahụrụ ya. E wezụga na ha bụ ndị nlereanya ọma nke ịdị uchu na ịrụsi ọrụ ike, ha na-enwe mmetụta na-eweta ịdị n’otu n’ezinụlọ Betel ahụ nile. Ha na-enwe mmasị ile ọbịa, ha na-enwekwa mmasị iso ndị òtù ezinụlọ ahụ bụ́ ndị na-akatabeghị ahụ na-anọkọ, na-ekerịta ọṅụ ndị na-esite n’ibi ndụ ndị Kraịst ruo ọtụtụ afọ. Ndị na-eto eto na-agbasokwa ihe nlereanya ha site n’ịkpọ ha n’ọnụ ụlọ ha iji nọkọrịtaa nakwa inyere ha aka mgbe ọ dị mkpa. Lee ndị nlereanya ọma ha bụ n’ezie!
N’ịbụ ndị meriworo ndịrịta iche ndị na-akpata esemokwu na adịghị n’otu n’ọtụtụ ebe, ndị ọrụ afọ ofufo a ji obi ụtọ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji jeere ndị ọzọ ozi dị ka ndị òtù ezinụlọ Betel dị n’otu n’India.—Abụ Ọma 133:1.
^ par. 5 Lee Ụlọ Nche, (Bekee) November 1, 1987, peeji nke 21.
[Ebe E Si Nweta Foto Dị na peeji 8]
N’azụ: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.